सरकारले भारतलाई चिढ्याउने गतिविधि गरेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको आक्रोश – BRTNepal
सरकारले भारतलाई चिढ्याउने गतिविधि गरेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको आक्रोश
बिआरटीनेपाल २०७७ जेठ ८ गते २२:०१ मा प्रकाशित
उहाले कोरोना पछिको नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गरेर लैजान भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गरेर लैजानु पर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनु भएका डा. भट्टराईले नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाएर लगेको खण्डमा लगानी समेत भित्रन सक्ने बताउदै भारतलाई चिढ्याउने सरकारको नीति ठीक नभएको धारणा राख्नुभयो ।